Galaxy S21 Ultra Review : The Ultimate Flagship Phone ? — Anycall Mobile
By RKhar M Thant January 26, 20216Mins Read
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့ S21 Ultra နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှမပြောခင် ဒီနှစ်ကတော့ Samsung ဖုန်းတွေ ရေလည်ပြောင်းလဲလာတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မကြာသေးခင်ကမှတွေ့လိုက်ရတဲ့ Galaxy A12 မှာ ဈေးနည်းနည်းနဲ့ 6/128GB Variant ကိုရောင်းပေးလာတာရယ်။ အခုပြောမယ့် Galaxy S21 Ultra ရယ်ကြောင့်ပါ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော့်သာ အရင်နှစ်က S20 Ultra ကိုစိတ်ကြိုက် Customize လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ထွက်လာမယ့်ဖုန်းက ဒီဖုန်းနဲ့အနီးစပ်ဆုံးတူနေပါလိမ့်မယ်။
S20 Ultra တုန်းက Autofocus ပြဿနာကိုပြင်လိုက်တယ်။ Back Cover နဲ့ Design ကိုပြောင်းသုံးထားတယ်။ ဘယ်တော့မှ Powerful SoC စာရင်းထဲမဝင်ခဲ့တဲ့ Exynos SoC တွေကို လူတွေ လည်ပြန်ငေးလာအောင် ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်သာဆိုလည်း ဒီလို Changes တွေကိုပဲ လုပ်ဖြစ်မှာပါ။ ကဲ သဘောကျမိတာတွေကို ချီးမွမ်းခန်းတွေ ဆက်တိုက်ဖွင့်နေလို့ ဟာ ဒါကြီးက Sponsor Review ကြီးများလားဟ လို့ မတွေးလိုက်ပါနဲ့ဦး။ သဘောမကျတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်း တချက်ချင်းစီပြောသွားဦးမှာဖြစ်လို့ အဆုံးထိဆက်ဖတ်ပေးကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကဲ အရင်ဆုံး မြင်နေရတဲ့အပိုင်းတွေကနေ စလိုက်ကြတာပေါ့။ ပထမဆုံး ဒီဖုန်းကိုမြင်မြင်ချင်း 80% သောလူတွေကတော့ ကြိုက်မယ် သဘောကျမယ်လို့ မထင်မိဘူး။ Camera Bump ကို Frame နဲ့ပေါင်းပြီး အထူကြီးလုပ်ထားတာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း သဘောမကျမိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုင်သုံးတာကြာလာလေလေ၊ ဒါကြီးက ကိုယ့်အတွက် ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ခံစားမိလာလေလေပါပဲ။
S21 Ultra – Anycall Mobile
အိုကေ Back Cover ကတော့ Matte Finish ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လက်ရာလေးတွေတော့ နည်းနည်းထင်နိုင်တယ်။ Cover တပ်ကိုင်မှပဲ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်မိတယ်။ မဟုတ်ရင် Camera Bump အထူကြီးနဲ့ စားပွဲပေါ်တင်ရ ချရတာ၊ Back Cover မှာ လက်ရာတွေနဲ့မို့ ကြည့်ရတာ ဘယ်လိုမှတင့်တယ်မယ်မထင်ဘူး။ နောက်ပြီး Display က Curved လို့သာပြောတာ Flat နီးနီးလောက်ပဲ ကွေးပေးထားတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သဘောကျတယ်။ အဲ့အကြောင်းကိုလည်း Mi 11 Review မှာပြောထားပြီးသားပါ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က Mi 11 ရဲ့ Curved Display ကို Flat ဖြစ်လွန်းလှပြီထင်တာ။ ဒီကောင်ကပိုပြီးတော့ Flat ဖြစ်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အဆင်ပြေတယ်။ အိုကေ ဒီဇိုင်းကိုတော့ ဒီလောက်ပဲ။ အားလုံးချုံပြောရရင် သဘောကျတယ်။
ဪ ဒါနဲ့ Samsung က SD Card Slot ကို တိတ်တိတ်လေး ဖြုတ်လိုက်ပါပြီ။ ဆိုတော့ သူ့မှာ Internal Storage 128GB, 256GB, 512GB (၃) မျိုး ရှိမယ်။ များများသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ 256 လောက်ထိ တခါတည်း တက်ဝယ်လိုက်ထားတာ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ဒီဖုန်းမထွက်ခင်က ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ Performance ကိုတော်တော်လေး မျှော်လင့်ခဲ့တာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Snapdragon 888 မှာလိုမျိုး Performance Core ကို Cortex X1 သုံးထားတဲ့ Exynos 2100 ကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်းကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SD 888 ကို မမှီတာတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Mi 11 မှာတုန်းက Antutu Benchmark Run ကြည့်တော့ 670,000 ကျော်ရတယ်။ အခု ဒီ Exynos 2100 မှာကတော့ 540,000 ကျော်ပဲရှိပါတယ်။
Antutu Benchmark result of S21 Ultra – Anycall Mobile
ဒါပေမယ့် ဒါက ကိန်းဂဏာန်းတွေအရပါ။ တကယ်တမ်း Daily Usage မှာ အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်ဖို့ဆို 280,000၊ 300,000 လောက်က တော်တော်လေးလုံလောက်နေပါပြီ။ အိုကေ ဂိမ်းတွေဘက်ကို နည်းနည်းလေး လှည့်မယ်။ ဘယ်သူနေနေ သိန်း ၂၀ လောက်ပေးရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို ဂိမ်းလေးနည်းနည်းပါးပါးတော့ ပျင်းရင်ဆော့ချင်ကြမှာပဲလေနော့ ?
Game တွေဆော့ကြည့်ရသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းပါးပါးလောက်ဆို အဆင်ပြေတယ်။ ဂိမ်းချည်းဆော့ဖို့တော့ အကြံမပေးဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ PUBG တစ်နာရီလောက်ဆော့လိုက်တာ Heat တော်တော်လေးတက်လာတယ်။ နောက်ပြီး PUBG မှာ Ultra HD မရသေးဘူး။ HDR, Ultra ပဲရဦးမှာ။ Ultra HD က SD 888 နဲ့ Mi 11 မှာတော့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလည်း ပူတာပါပဲ။
PUBG on S21 Ultra – Anycall Mobile
နောက်ပြီး ဒီ S21 Ultra နဲ့ Camera ပဲထိုင်ရိုက်နေမယ်ဆိုရင် နာရီဝက် ၄၅ မိနစ်လောက်ဆို Frame အပေါ်ပိုင်းကပူလာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Performance အနေနဲ့ မကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူး ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် Samsung ရဲ့ Signature အတိုင်း နည်းနည်းတော့ပူတယ်။ ဝယ်မယ်ဆို Cover တပ်ကိုင်ပါ။
Display တွေကို သူများတွေဆီ ထုတ်ရောင်းနေတဲ့သူပီပီ သူ့ Display ကလည်း တကယ်ကို အပြစ်ရှာလို့မရသလောက်ပါပဲ။ Color တွေ၊ Contrast တွေ၊ Sharpness တွေ အကုန်အဆင်ပြေတယ်။
S21 Ultra’s Display – Anycall Mobile
အရင် S20 Ultra မှာတုန်းက ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ 2K (WQHD+) Resolution ထားထားရင် 120Hz Refresh Rate သုံးလို့မရဘူး။ အဲ့ဒီ ပြဿနာကို အခု S21 Ultra မှာ လှလှပပ ဖြေရှင်းသွားတယ်။ အရင်လို 60Hz, 90Hz, 120Hz တွေရွေးစရာ Option တွေထည့်မပေးတော့ဘဲ Standard နဲ့ Adaptive ဆိုပြီး နှစ်ခုပဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။ Standard ဆို 60Hz ပုံသေပဲ။ Adaptive မှာထားရင် 10Hz ကနေ 120Hz အတွင်းကို Auto Adjust လုပ်ပြီး သုံးပေးသွားတယ်။
ကျွန်တော်သုံးကြည့်သလောက်အနေအထားမှာတော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပြီး Smooth ဖြစ်တယ်။ Frame Rate တွေကျသွားတာမျိုး မတွေ့ရဘူး။ ပုံမှန်အချိန်မှာဆိုရင် 60Hz ပဲထားပေးတယ်။ TestUFO နဲ့စမ်းကြည့်ရသလောက်လည်း အဲ့လိုပါပဲ။ မလိုအပ်ဘဲ Battery အပိုကုန်တာသက်သာတာပေါ့။
S21 Ultra’s Camera – Anycall Mobile
အိုကေ ထပ်ပြီး Camera အကြောင်းကို ဆက်လိုက်ကြတာပေါ့။ ဒီလောက်ထူနေရတာနဲ့ တန်အောင် ဘာတွေပြန်ပေးနိုင်မလဲ ? Well, Camera App ထဲကို စစဝင်ချင်းသတိထားမိလိုက်တာက သူတို့ Live Focus Mode ဆိုတာကို Portrait လို့ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်။ တကယ် ကောင်းပါတယ်။ ဘာကြီးမှန်းမသိတဲ့ Terms တွေကို သုံးမယ့်အစား နားလည်လွယ်တဲ့ Terms တွေကို ပြောင်းသုံးတာကို အားပေးတယ်။ နောက်ပြီး အရင်က Single Take feature ကိုလည်း ထည့်ပေးထားသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Exynos 2100 ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တဲ့ Camera4လုံးစလုံးနဲ့ တပြိုင်နက်တည်း ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတဲ့ Feature ကိုလည်း Director View Mode မှာ ကောင်းကောင်း အသုံးချထားတာကို တွေ့ရတယ်။ Selfie Camera နဲ့ Rear Camera တွေကိုသုံးပြီး တပြိုင်တည်း Video ရိုက်လို့ရတဲ့ Feature ပါ။ Mid Range ဖုန်းတွေမှာလည်း ဒီလို Feature တွေပါတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့လိုတော့ ရိုက်နေရင်း Camera တွေတစ်ခုပြီး တစ်ခုချိန်းလို့မရဘူး။ ဒါက Exynos 2100 ရဲ့အားသာချက်ပါ။
Normal Lens – Anycall Mobile
Flagship ဖုန်းလည်းဖြစ်တာတကြောင်း၊ Samsung လည်းဖြစ်တာတကြောင်းမို့ ပုံထွက်တွေကတော့ များများစားစား ပြောစရာမလိုဘူး။ မိုက်တယ်။ 108MP ကို Pixel Binning နဲ့ကောင်းကောင်းထိန်းထားတော့ Detail တွေလည်းကောင်းတယ်။ Contrast တွေများနေတာမျိုးမရှိဘူး။ Color တွေကလည်း အပြင်ကနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးတူပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက AI တော်တော်လေးမိုက်တယ်။ ရိုက်တုန်းက ပုံထဲမှာ Noise တွေ ဗရဗွဖြစ်နေလည်း ရိုက်ပြီး After Processing မှာ ကြည့်လိုက်ရင် Noise တွေပျောက်ပြီး Sharp ဖြစ်တဲ့ပုံတွေထွက်လာပါတယ်။
အိုကေ နောက်ထပ်က Telephoto Lens တွေအကြောင်း၊ Samsung က S20 Ultra မှာ ပထမဆုံး 100X Space Zoom ဆိုတာကို ချပြခဲ့ပါတယ်၊ အဲ့တုန်းက မှတ်မှတ်ရရစမ်းရိုက်ကြည့်တာ Zoom က 100X ကိုရောက်သွားရင် Tripod ပေါ်တင်ပြီး Frame ရွေ့တာတောင် မငြိမ်ချင်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခေါက် S21 Ultra မှာ အဲ့အတွက် Stabilizer ပါပါလာတာတွေ့ရတယ်။ တော်တော်လေး အဆင်ပြေသွားတယ်။
Moon Shot taken with Handheld – Anycall Mobile
အခုပုံမှာ လကို 100X နဲ့ရိုက်တယ်။ Tripod မသုံးဘူး။ Handheld နဲ့ပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေး ကိုင်ထားတာပါ။ ပုံထွက်က အခု မြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Night Mode နဲ့ရိုက်ရင် Noise လေးတွေနည်းနည်းပါပေမယ့် ကြည့်ရတာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Pro Mode ကို နည်းနည်းပါးပါး အသုံးချတတ်ရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ ဘယ်လောက်မှောင်နေနေ အခုလို ပုံထွက်မျိုးကိုရပါတယ်။
Selfie Camera မှာက 40MP ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ မျက်နှာပေါ်က မျက်ခုံးမွှေး နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေကို တမျှင်ချင်းစီမြင်နေရတယ်။ နောက်ပြီး Background က Highlight တွေကိုလည်း အဆင်ပြေပြေထိန်းထားနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အရင်က S20 Ultra လိုပဲ Group Selfie Feature လည်း ပါလာပါသေးတယ်။
Haptic Feedback, Speakers
အိုကေ Haptic Feedback အကြောင်း။ ဒီ Haptic Feedback က သာမန် Mid Range တွေမှာ စာဖွဲ့လောက်စရာမဟုတ်ပေမယ့် အခုလို သိန်း ၂၀ လောက်ပေးရတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့ ပြောကိုပြောရလိမ့်မယ်။ လက်အရသာခံဖို့ပေါ့ဗျာ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ ခံစားရတာကတော့ Haptic Feedback က အရမ်းကြီး Premium ဆန်မနေဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ အဲ့ဒီခံစားချက်ကို ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ မသိဘူး။ ဆိုင်မှာလာပြီးစမ်းသုံးကြည့်လိုက်။ ပြီးရင် Mi 11 ကိုစမ်းကြည့် ဘာကွာလဲဆိုတာ ခံစားရလိမ့်မယ်။ Mi 11 မှာ Fingerprint ဖွင့်တာတို့၊ Recent Apps ရှင်းတာတို့လုပ်ကြည့်ရင် ဖုန်းက Horizontally ခါသွားတဲ့ Haptic မျိုးကို ခံစားရတယ်။ ဒီမှာ အဲ့ဒီ Haptic မျိုးကိုမတွေ့မိဘူး။
S21 Ultra’s Down-firing Speaker – Anycall Mobile
ဒီလိုပြောလို့ S21 Ultra ရဲ့ Haptic ကြီးက စုတ်ပြတ်နေတာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ဘူးရယ်။ အထင်လွဲမှာစိုးလို့၊ သူ့ရဲ့ Haptic ကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူဆိုရင်တော့ မိုက်တယ် ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးပဲ။ Mi 11 နဲ့ယှဉ်သုံးကြည့်မှ တခုခုလိုနေတယ်ဆိုတာမျိုးကို ခံစားရတာ။
Speakers တွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Flagship Level Speakers ပါပဲ။ Display အောက်က Earpiece ကထွက်တဲ့အသံနဲ့ Downfiring Speakers ကထွက်တဲ့အသံနဲ့က Gain အတူတူလောက်ပဲ။ တစ်ဖက်ကပိုသာနေတာမျိုးမရှိဘူး။
Tuned by AKG Speakers တွေက V Shaped နည်းနည်းဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ Mid(Vocal) သံထက် Bass နဲ့ Treble နည်းနည်းများနေတယ်။ ကျွန်တော်ကပဲ V Shaped Fan မဟုတ်လို့လားတော့မသိဘူး။ ဒီမှာနားထောင်ရတဲ့ Vocal နဲ့ Mi 11 ရဲ့ Vocal သံယှဉ်ရင် Mi 11 က Vocal သံကိုပိုကြိုက်တယ်။ အင်း ဆက်ပြောရင် Audiophile Level ကိုရောက်တော့မှာမို့လို့ အတိုချုံးလိုက်မယ်။ Speaker က သူ့နည်းနဲ့သူတော့ အဆင်ပြေပြီး Premium Level ကိုရောက်ပါတယ်။
Battery က တော့ ဒီဖုန်းမှာ အားမရဆုံးပါပဲ။ 5000mAh ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ထားသလောက် အားမခံဘူး။ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့က 5000mAh ဆိုရင် နှစ်ရက်လောက်တော့ အေးအေးဆေးဆေး Daily Use အသုံးခံမယ်လို့ မျှော်လင့်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဖုန်းက တစ်ရက်ပဲခံပါလိမ့်မယ်။ Daily Use ပဲကိုနော်။
Resolution ကို WQHD+ (2K) မှာထားပြီး ဂိမ်းဆော့တာ နာရီဝက်လောက်ကို 10% နှုန်းလောက်ကျတယ်။ ဒီနှုန်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် တစ်နာရီကို 20% နဲ့5နာရီလောက်ပဲခံမှာပါ။5နာရီတောင် အပြည့်ခံမယ်မထင်ဘူး။ WQHD+ ဖွင့်ပြီး ဂိမ်းချည်းထိုင်ဆော့နေရင်ပြောတာနော်။
Samsung Logo – Anycall Mobile
Daily Use လောက်ပဲသုံးတယ်ဆိုရင် မနက်ထတယ် Facebook ဘာညာပွတ်မယ်။ ရုံးတက် ရုံးမှာဖုန်းသိပ်မသုံးဘူး။ ညနေရုံးဆင်းလောက်ကနေမှ စပြီး သုံးမယ်။ အဲ့ဒါဆို ည ၁၁ ခွဲ ၁၂ လောက်ဆိုရင် အားသွင်းရမှာပါ။ တစရက်လောက်ပဲ ခံပါလိမ့်မယ်။
ဒါက 2K Resolution နဲ့ စမ်းထားတာပါ။ FHD+ Resolution နဲ့စမ်းရင် ဒီထက်ပိုပြီးအားခံတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဒါပေမယ့် Mi 11 မှာပြောခဲ့သလိုမျိုး 2K Resolution ရတဲ့ဖုန်းကို FHD+ နဲ့ဘာလို့သုံးရမှာလဲ ? ပေးဝယ်ရတာ မတန်တော့ဘူးလေ။ ဟုတ်တယ်မလား ?
အဲ့လိုပြောလို့သာပြောတာ စမ်းတော့ စမ်းထားပါသေးတယ်။ FHD+ Resolution နဲ့ Daily Use ချည်းပဲသုံးမယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်း 8 နာရီလောက်ထိခံပါတယ်။ အင်း FHD+ နဲ့ဆိုရင်တော့ ထင်သလောက်မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုနကပြောသလိုပေါ့ 2K ရတဲ့ Display ကို 2K နဲ့မသုံးရင် မတန်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုကတော့ Charging ပိုင်းပါပဲ ။ လက်ရှိ Flagship ဖုန်းတော်တော်များများမှာ အနည်းဆုံး 50W Fast Charging ‌ထည့်ပေးနေချိန်မှာ S21 Ultra မှာ 25W Fast Charging ပဲရတာကတော်တော်လေးဆိုးပါတယ်။ ကြားထဲက Charger တောင်ဖြုတ်လိုက်ပါသေးတယ် :3
OneUI 3.1 – Anycall Mobile
Software Experience အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီ Samsung ရဲ့ OneUI မှာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Software Experience ကို မရနိုင်တာတော့သေချာတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း OnePlus ရဲ့ Oxygen OS ကို အကြိုက်ဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီ OneUI 3.1 ကလည်း တော်တော်လေး သုံးလို့ကောင်းလာတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ Volume Control အတွက် UI တွေပြောင်းသွားတယ်။ နောက်ပြီး Camera ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ Auto Focus ကောင်းလာတာတွေ၊ လကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာ Stabilize လုပ်ပေးတာတွေက ဒီ Software အကူအညီတွေရောပါပါတယ်။ UI တွေက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ။ တချို့နေရာတွေမှာတော့ Portrait Mode ကို Live Focus လို့သုံးသလိုမျိုး နားလည်ရခက်တဲ့ Terms လေးတွေရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါလေးတွေကိုလည်း နောက် Update တွေမှာ ပြင်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အိုကေ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Conclusion ကိုရောက်လာပြီပေါ့လေ။ ဒီဖုန်းက Mi 11 လိုမျိုး Price to Performance ဖြစ်တဲ့ဖုန်းတော့ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ကောင်းတော့ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံကလည်း ပမာဏတစ်ခုထိသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ ဖုန်းမျိုးပါ။ ဒါ့ကြောင့် Flagship ဖုန်းတစ်လုံးလိုနေတဲ့ Business Man တွေ၊ Samsung မှ Samsung ဆိုတဲ့ Samsung Fan တွေ နောက်ပြီး Flagship ဖုန်းကို Flagship ဖုန်းလိုသုံးမယ့်လူတွေအတွက် ရဲရဲကြီးဝယ်ပါလို့ Recommend ပေးလို့ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ Game ဆို Game ပဲထိုင်ဆော့နေမယ့်သူတွေ၊ Price to Performance ဖြစ်မှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ ဒီဖုန်းကိုထည့်မစဉ်းစားသင့်ပါဘူးလို့ ပြောရင်းနဲ့ပဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် Reveiw တစ်ခုမှာ ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့…